Posted by Tranquillus | Jan 5, 2022 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Qaababka xushmada: Ha isku qasin!
Qorista warqad, qoraal ama iimaylka xirfadle waxay ku lug leedahay ixtiraamka xeerarka dhaqanka qaarkood. Qaababka asluubtu waa shay lagama maarmaan ah. Xitaa haddii ay tahay email xirfadle ah, waxay mudan yihiin in la qiimeeyo. In la iska indhatiro ama la iska indhatiro xeerarkan waxay wax u dhimi kartaa xidhiidhkaaga xirfadeed.
Aqbal salaanta ama odhaahda salaanta: Muxuu xeerka dhaqanku leeyahay?
Ma aha wax aan caadi ahayn in la helo dhammaadka warqad ama e-mail xirfadle ah, qaacidada asluubta ah: "Fadlan aqbal muujinta salaanteyda ugu fiican". Inkasta oo uu baahsan yahay, waa qaab-dhismeedka khaldan oo nasiib darro ah oo laga yaabo in uu baabi'iyo aragtida xirfad-yaqaannimada ama kartida soo diraha emailka.
Falka lagu ansixiyo waxa uu ka jawaabayaa xeerar gaar ah oo xanuunka ereyada la xidhiidha qaacidooyinka asluubta aanay had iyo jeer sax ahayn. Si loo heshiiyo, waxa ay asal ahaan asal ahaan Laatiinka u tahay "Gratum" oo macneheedu yahay "Farxad ama soo dhaweyn". Guud ahaan, falkani waxa uu qirayaa dhammaystirka la xidhiidha muujinta ama caymiska.
Sidaa darteed, weedha asluubaysan ee "Fadlan aqbal muujinta ixtiraamkayga", "Fadlan aqbal muujinta ixtiraamkayga" ama xitaa "Fadlan aqbal xaqiijinta tixgelinteyda" gabi ahaanba waa sax.
Dhanka kale, tani waa qalad: "Fadlan aqbal muujinta salaanteyda ugu fiican". Sababtu waa caddahay. Waxaan kaliya gudbin karnaa muujinta dareenka ama dabeecadda sida ixtiraamka ama ixtiraamka. Ugu dambeyntii, waxaan si fudud u dhihi karnaa: "Aqbal salaantayda".
Erayga asluubaysan ee dhamaadka iimaylka "Fadlan aqbal muujinta ixtiraamkayga" sidaas darteed waxay ka dhigan tahay wax aan jirin.
Muujinta salaamaha ama dareenka: Maxay caamadu yidhaahdaan?
Inta badan waxaynu la kulannaa odhaahyo asluubaysan oo ay ka mid yihiin: “Aqbal, Mudane Madaxweyne, muujinta dareenkayga gaarka ah” ama “Fadlan, Mudane, aqbal muujinta dareenkayga gaarka ah”.
Erayadan asluubaysan waa sax. Runtii, iyadoo la raacayo adeegsiyada lagu aqoonsaday luqadda Faransiiska, qofku wuxuu muujiyaa dareenka ee ma salaamo.
Labadan nuances markii la sameeyay, ma jiraan wax ka hor istaagaya in la doorto qaabab gaagaaban oo edeb leh. Tani sidoo kale waa waxa ku habboon emails-xirfadeedka, faa'iidada taas oo lagu qadariyo xawaaraha.
Iyadoo ku xiran qofka qaataha ah, sidaas darteed waxaad dooran kartaa qaacido asluubaysan sida: "Salaan wanaagsan", "Salaan wanaagsan", "Salaan wanaagsan", "Daacadnimo", "Salaan wanaagsan", iwm.
Si kastaba ha ahaatee, la soco in iimaylka xirfadlaha ahi aanu qaadi karin khaladaadka higgaada ama naxwaha. Tani waxay wax u dhimi kartaa sumcaddaada ama tan ganacsigaaga.
Intaa waxaa dheer, soo gaabinta sida "Cdt" ee wanaagga ama "BAV" ee adiga kugu habboon, laguma talinayo, xitaa xaalad aad la wadaagto shahaado isku mid ah oo aad kala sarreyso weriyahaaga.
Ogow xeerarka isticmaalka ee macnaha guud Janaayo 5th, 2022Tranquillus
horeKhaladaadka ugu caansan iimaylka ganacsiga
socdaKoontada tababarka shaqsiyeed (CPF): ogow xuquuqdaada